Radio Asal 88.6 MHz – Jowhar _ Soomaaliya » Macalin dugsi Oo B/weyen Ku kufsaday Gabar 9 Jir ah.
Macalin dugsi Oo B/weyen Ku kufsaday Gabar 9 Jir ah.
Wararka ka imaanayo magaalada Beladweyne ee xarunta Gobalka Hiiraan dowlad Goboledka HirShabelle ayaa sheegaya in Macalim dugsi Qur’aan uu halkaasi ku kufsaday Gabar 9 sano jir ah oo katirsaneed Ardaydii uu waxbarayay.
Agaasimaha Isbitaalka Guud ee magaalada Beladweyne Dr Axmed Maxamed Khaliif ayaa sheegay in Gabadha oo la keenay Isbitaalka ay ogaadeen in la kufsaday Gabadha islamarkaana ay siiyeen daawooyin wax u taraya caafimaadkeeda.
Macalimka kufsiga ugeestay gabadha ayaa la sheegay in uu heestay hub uu ka dhax dagaalamay dugsiga kadibna uu baxsaday waxaana ku raad jooga Ciidamada Booliiska Soomaaliya ee ka howlgalla Gobalka Hiiraan.
Guddoomiyaha degmada Beladweyne ayaa warbaahinta u sheegay in ay ku raad joogaan Ninka kufsiga geestay sharcigana ay hor keeni doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Dhawaan ayaa aheyd markii qeybo ka mid ah Gobolka Sanaag sidaan oo kale fal kufsi ah loogu geystay gabar 5 sano jir ah, mana jirto cid weli loo soo qabtay.